आज घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति छ त ? हेर्नुहोस् – Ap Nepal
आज घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति छ त ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । बुधबार सुनको मुल्य तोलामा १ सय रुपैयाले घटेको हो ।
कात्तिक २८ गते प्रतितोला ९५ हजार २ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर प्रतितोला ९५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य १ हजार २ सय ३० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ ।
नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “
नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
Prevपैसा पठाउँदै हुनुन्छ , हेर्नुस् आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको भाउ
Nextपल शाह रियाषा दाहाल र उषा उप्रेतीको अभिनयमा सबैको मन छुने गीत “डाँफे चरी” (भिडियो सहित)
नाजिर हुसेन र उषाको बेजोड अभिनयमा ‘जवानी ताजा ताजा छ’ सार्वजनिक ( भिडियो सहित )
दोहोरीमै दिने हरेक प्रश्नको उत्तर १४ बर्षकी अचम्मकी बालिका, ‘रमेश प्रसाईसँग चल्यो दो;होरी…(भिडि, यो सहित)
जानिराखौं, कालो नुन अथवा बिरे नुनले खाना स्वादिष्ट बनाउनको साथै अन्य फाइ,दाहरु, यस्ता छन्
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (4136)
यसरी सड,कमै छमछमी नाचे ट्राफिक प्रहरी- हेर्नुहोस (भिडियो सहित ) (4112)
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहाल बीच बि’बाह हुन्छ भन्दै कल्पनाकी आमा आइन मिडि;यामा ,कल्पना लाजले भु,तुक्कै – (भिडियो सहित कुराकानी) (2342)
गुर्जो सेवन गर्दै हुनुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् (आ;युर्वेद विभागबाट जारी पत्र सहि’त) (1896)
टिकट;ककाे लागी स्वरुपनै फेरीन निरुपाले -हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (1742)
सस्तो मूल्यमा बजाज पल्सर १२५ नयाँ मोडल भयो लन्च , यस्तो छ मुल्य… (1671)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (1425)
पारस सरकारलाई मैले वि’वाह गरौ भन्दा यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले मर्न पनि खोजे- ५ दिनसम्म कोठामा थुनि;एर बसे: सोनिका (भिडि,यो हेर्नुस्) (1196)
रमेश प्रसाईकी हुनलागेकी जिबन संगिनी नन्दाको भित्रि कथा, मरी भनेर सबैले माया मारेका थिए ,हेर्नुस मन रुवाउने कथा (भिडि; यो सहित) (1048)
‘नरोउ आमा सम्झेर छोरो, मुलबाटोमा हेरेर एकोहोरो ।’ विदेशीएको छोरो घर आउने दिन हेर्दा-हेर्द आमाको ….(भिडियो सहित)
गायिका टीका सानुले गायिन हिन्दी भाषामै दोहोरी , सबै छक्क ( भिडियो सहित )
रमेश प्रसाई र रिना केसीको आयो अर्को खतरना,क दोहोरी भि’डन्त (भिडियो सहित)
मिडियामा पहिलो पटक नायक धिरेन शाक्यसँग आइन छोरी जस्मिन..हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )